मैले आत्महत्या गरिनँ | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
‘फोर्ब्स थर्टी अन्डर थर्टी’ सम्मेलनमा पहिलो पटक म सार्वजनिक रुपमा बोल्न उभिँदा त्यहाँ ३० वर्षभन्दा कम उमेरका १५ सय प्रतिभासम्पन्न युवायुवती थिए। अन्दाज गर्नुस्, १९९८ मा तिनीहरुमध्ये सबैभन्दा उमेरदार १४ वर्षको थियो होला र सबैभन्दा सानो चाहिँ चार वर्षको। मैले ठट्टा गर्दै भनेँ, 'तपाईंहरुमध्ये निकै कमले मेरो नाउँ सुन्नु भएको होला, धेरैले चाहिँ र्‍याप गीतमा।'
अचम्ममा नपर्नुस्, मेराबारेमा र्‍याप गीत पनि गाइएका छन्। गनेर ल्याउँदा ४० वटा जति पुग्लान्! त्यो रात बडो अचम्म भयो, एउटा २७ वर्षे ठिटो नजिकिन खोज्यो। ऊ आकर्षक थियो तर मैले ऊसित केही क्षण कुरा गरेपछि टक्टकिन खोजेँ। त्यो बेला उसले के भन्यो थाहा छ? 'मसँग संगत गर्नुस्, तपाईंलाई म पुनः २२ वर्षे महसुस गराउनेछु।' त्यो रात मैले सोचेँ, यो संसारमा म मात्रै एउटी ४० वर्षे महिला हुँली, जो अब पुनः २२ वर्षकी हुन चाहन्नँ।
मेराबारे नराम्रा टिप्पणी गरिए। म आवारा भएँ, बेस्या मानिएँ, बेकुप, चरित्रहीन र 'त्यो खालकी आइमाई' भएँ। मलाई थाहा छः 'त्यो खाले आइमाइ'को पनि अस्तित्व छ, त्यसको पनि आत्मा छ भन्ने बिर्सन निकै सजिलो हुन्छ। कुनै बेला उसको मुटु टुक्राटुक्रा थिएन न त निराश नै थिई।
टेपमा राष्ट्रपतिप्रति प्रेम अभिव्यक्त गरिरहेकी छु र मेरो मन उनले दुखाएको गुनासो गरिरहेकी छु। कहिलेकाहीँ म दुर्व्यवहार गर्छु, छिटोछिटो, गुनासोपूर्ण कुरा गर्छु, कहिले निकै नराम्रो व्यवहार गर्छु र कहिले ज्यादै असभ्य हुन्छु। सुरिरहेकी छु... भित्रसम्मै लाज लागिरहेको छ। मेरो सबैभन्दा खराब स्वरुप यस्तो पनि रहेछ भन्ने आफैँलाई चिनेर छक्क परिरहेकी छु, जुन स्वरुप मैले यसअघि कहिल्यै देखेकी थिइनँ।
केही दिनपछि यही कुरा अनलाइनमा छापिन्छ... अब सबैले पढ्न सक्ने भए ती कुरा। अडियो टेप टेलिभिजनमा पनि प्रसारण गरिन्छ। यस्तो बेलामा सर्वसाधारणले जे जति अपमान गर्नुपर्थ्यो गरे तर त्यो खप्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यो बेला जीवन जिइँदैन, घिसारिन्छ। १९९८ ताका यस्ता घटना हरेक दिन घट्दैन थिए। कसैको निजी कुराकानी र क्रियाकलाप चोरी हुँदैनथ्यो। न त नसोधी त्यसलाई सार्वजनिक गरिन्थ्यो, बिना कुनै स्वीकृति, बिना कुनै सन्दर्भ, बिना कुनै संवेदना सार्वजनिक हुँदैनथ्यो।
दुई दशकयता हामी बिस्तारै बेसरम र सार्वजनिक बेइज्जतीको बिऊ रोप्दै आइरहेका छौँ। गसिप वेबसाइट, पापाराजी क्यामेरा, रियालिटी टिभी र कहिलेकाहीँ ह्याकर पनि प्रताडनाको अंशियार बन्ने गर्छन्। संवेदनहीनताको पराकाष्ठाका कारण दादागिरी, निजत्वको हनन, साइबर बुलिङजस्ता कुरालाई बढावा दिइँदैछ। यस किसिमको संस्कृतिलाई प्राध्यापक निकोलस मिल्स 'प्रताडनाको संस्कृति' भन्न रुचाउँछन्। तर प्रताडनाको यो संस्कृतिमा सार्वजनिक लज्जाको पनि प्राइस ट्याग (मोल) झुण्डिएको छ। यो मोल पीडितले चुकाएको मूल्यसँग कहिल्यै नापिँदैन। टाइलर र अन्यले खासगरी महिला र अल्पसंख्यकले जसरी चुकाउनु पर्छ, त्यसको त कहिल्यै हिसाब गरिँदैन। हिजोआज प्रताडना एउटा बजार बनेको छ, उद्योग बनेको छ। जति बढी लज्जा, उति बढी क्लिक र जति बढी क्लिक उति बढी विज्ञापनबाट आउने पैसा।
समाज विज्ञानी सेर्गेइ मोस्कोविस्कीको 'माइनोरोटी इन्फ्लुएन्स'को सिद्धान्तले भन्छ, लामो समयसम्म ज्यादै सानो संख्याले केही कुरा अँगाले भने संसारमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ। अनलाइनको संसारमा हामी यही माइनोरिटी इन्लुएन्स ल्याउन सक्छौँ।
अनलाइन सम्वेदनशीलताले हामी सबैको भलो नै हुन्छ, एउटा उम्दा, सुरक्षित संसार बन्छ। हामीले अनलाइन व्यवहारमा सहानुभूति ल्याउनु पर्छ। समाचारहरुलाई सम्वेदनाका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ। कुनै समाचार क्लिक गर्दा विचार पुर्‍याएर क्लिक गर्नुपर्छ। यो अभियान सुरु भएका नौ महिनायता मलाई सबैभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न नै 'किन?' हो। म यत्तिका वर्षपछि मैले टाउको उठाएर किन हिँड्न थालेँ? राजनीतिसँग मेरो कुनै लेनदेन छैन तर मेरो एउटै उत्तर छ कि अब समय आइसक्यो। समय आइसक्यो कि विगतका घटनाबाट लजाएर लुकीलुकी हिँड्न बन्द गरुँ, अपमानित भएर बाँच्ने समय अब गइसक्यो, मेरा घटना इन्टरनेटले नियन्त्रण गर्ने होइन, आफैँले नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाउँ। यो मेरो एक्लैका बारेमा होइन। जो कोही पनि शरम र सार्वजनिक रुपले उत्पीडित छ, उनीहरुले बुझून्ः तिमीहरु त्यसविरुद्ध लड्न सक्छौँ र अघि बढ्न सक्छौँ। मलाई थाहा छ, यसो गर्नु निकै कठिन छ। ज्यादै पीडायुक्त हुन्छ, सजिलो पक्कै छैन र छ लामो यात्रा पनि। तर तपाईंले आफैँप्रति सहानुभूति र संवेदना राखेर आफ्नो कथालाई बेग्लै अन्त्य दिन सक्नुहुन्छ।
(अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग यौन काण्डमा मुछिएकी लेवेन्स्कीको यो टेड टक सम्पादन, परिवर्द्धनसहित अनुवाद गरिएको हो।)